iCloud ကသော့ခတ်ထားတဲ့ iPhone ကိုသော့ဖွင့်လို့ရလား။ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone အတွက် iCloud lock အကြောင်းသိထားသင့်သမျှ
Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | | အိုင်ဖုန်းသတင်း, iCloud, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထာဝရသံသယပေါ်လာနိုင်သည် iCloud ကိုဖွင့်လိုက်ပါ? ဒီလုံခြုံရေးတိုင်းတာချက်ဟာ Apple က iOS7ရောက်ရှိပြီးကတည်းက iOS ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုပြand္ဌာန်းခဲ့ပြီး iOS 8 နဲ့သိသိသာသာတိုးတက်လာတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကသူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမသိဘူးဆိုရင်ပြproblemsနာများစွာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နိယာမအားဖြင့်၎င်းကိုတရားမ ၀ င်ယူခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုမဆုံးရှုံးရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလုံးဝမသုံးနိုင်စေရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခြားမကျေနပ်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ တီ
သင်၏အိုင်ဖုန်းအတွက် iCloud lock အကြောင်း၊ သင်မည်သို့ကာကွယ်ရမည်၊ မည်သို့အသုံးပြုရမည်စသည်တို့နှင့်သင်သိထားသင့်သမျှကိုသင်ကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။ iCloud ကနေဒီ lock ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။ ဒါဟာအစကအရေးကြီးတယ် iCloud မှကိရိယာတစ်ခုကိုသော့ခတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါ ဒါကိုဒုတိယလက်မ ၀ ယ်ခင်ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးကိုမလွတ်ပါစေနဲ့။
သူတို့က iCloud အကောင့်ကိုစကားဝှက်မရှိဘဲဖျက်ပစ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်
ဤဆောင်းပါးကြီးတွင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောမေးခွန်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဖြေကြားသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် iPhone ၏ iCloud ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုဝိုင်းရံထားသည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူအရေးကြီးသောစာရင်းပြုစုရန်သာမကဘဲသင်လည်းပါလိမ့်မည်။ ထင်မြင်ချက်များတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်နိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တုိ့သည် Actualidad iPhone ရှိကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုတက်ရောက်ရန်အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ iCloud သော့ခတ်ရန်နှင့်ကျယ်ပြန့်သောရိုးရှင်းသောအသုံးပြုသူလက်စွဲနှင့် အထူးသဖြင့် iCloud ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့သံသယကိုဖြေရှင်းဖို့ပါ.
အလွန်အရေးကြီးသည်မှာဤအချက်များနှင့်ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသိရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ ၎င်းလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုစနစ်တကျမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ iOS ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုလုံခြုံသောဂေဟစနစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းပညာအသစ်များနှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းဖြင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုမည်။
ထို့ထက်ကား၊ မည်သူမဆိုသူတို့၏စက်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခံရခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ Apple မှပြုလုပ်သောအရာအားလုံးကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချရမည်။ iOS ထုတ်ကုန်များ၏ခိုးယူမှုများသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သိသိသာသာကျဆင်းသွားကြောင်း Apple မှပြောကြားခဲ့သည်။
1 အိုင်ဖုန်းကို iCloud ကပိတ်ထားသလား။
2 iCloud မှကျွန်ုပ်၏ကိရိယာကိုမည်သို့ရှာပြီးပိတ်မည်နည်း
3 iCloud ကသော့ခတ်ထားတဲ့ iPhone တစ်ခုကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲ
4 iCloud က iPhone ကိုသော့ခတ်ထားရင်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ
5 iPhone အတွက် iCloud Lock ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
6 iCloud lock ကို jailbreak မှတဆင့်ဖယ်ရှားလို့ရလား။
အိုင်ဖုန်းကို iCloud ကပိတ်ထားသလား။
ပလက်ဖောင်းသည် iCloud ဖြစ်သော်လည်းအရာအားလုံးသည် Cloud မှဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည် အမှန်တကယ် "Find My iPhone Activation Lock" လို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iOS စက်ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်တွေ့ရပါက၊ 'activation lock' လုပ်ဆောင်မှုကိုအသုံးချနိုင်သည် ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါ iOS ထုတ်ကုန်များပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရခြင်းရှိမရှိအခြားသူများအား iOS ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းမှကာကွယ်ရန်။ TouchID နည်းပညာပါ ၀ င်သောကြောင့် iOS ထုတ်ကုန်သည်လက်လှမ်းမမီနိုင်မှုပိုမိုများပြားသော်လည်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်အထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုရှာဖွေ။ ပိတ်ဆို့ထားခြင်းသည်မမှားပါ။ လုံခြုံရေးသည် Apple ၏ ဦး စားပေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီသော့ခတ်အလိုအလျောက်တက်ကြွဖြစ်ပါတယ် iOS7မှမည်သည့် iOS device ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်, ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစက်ကိုအဝေးမှပိတ်ဆို့ရန်ခွင့်ပြုရုံသာမက၎င်းကိုရှာရန်အပြင်၎င်းကိုရယူရန်အတွက်ကတည်းက iOS device သို့မဟုတ် iPhone ရှိဒေတာများ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဖျက်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးကိုတားဆီးလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရယူပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းလက်ငင်းဝင်ရောက်နိူင်သော parameters များကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် device တစ်ခုကို restore လုပ်ချင်ရင် function ကိုသုံးရမယ် ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါ ရပ်ဆိုင်းသွားပြီး၊ ဒီအတွက် device ID နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Apple ID ကိုသိရမယ်။ အလားတူပဲ၊ အကယ်လို့ Apple ID နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ device တစ်ခုကိုသူ restore လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ start ချင်ရင် device ID နဲ့ password ချိတ်ဆက်ရပါမယ်။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အထူးသဖြင့်ခိုးယူခံရသည့်အခါ ၄ င်း၏ပြန်လည်နာလန်ထူရန်အခွင့်အလမ်းများများပြားစေသောကိရိယာကိုကာကွယ်ရန်ကူညီသည်။ Device ကို format ချပြီးရင်တောင် Apple ID နဲ့ဆက်နွှယ်မှုမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိသည်ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ခြေရာခံနိုင်ပြီးမည်သည့်အရာကမျှသင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲပြန်လည်အသက်ဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီနည်းပညာဟာ iPhone, iPad နဲ့ iPod Touch တွေသာမကကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုလည်းမရှိပါဘူး။
သငျသညျလိုလျှင် iCloud က iPhone ကိုသော့ခတ်ထားလားသိလားအောက်ပါပုံစံကိုဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်ရှိအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ခိုးယူခံရသည့်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ၀ ယ်ယူခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အရေးကြီးသည့်အရာသို့မဟုတ် ၄ င်း၏ပိုင်ရှင်ပျောက်ဆုံးသွားပြီး iCloud သော့ခတ်ထားသည်။
ဒါဆို iCloud က iPhone ကိုသော့ခတ်ထားလားဆိုတာကိုသင်အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်
iCloud သည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုသာလိုအပ်လိမ့်မည်။ Apple ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော tool တစ်ခုဖြစ်သည့် Cloud ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှကာလပတ်လုံး iCloud ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရမည် ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါ သင်တန်းဖွင့်ထားတယ်၊ အဲဒီကနေဒီလုံခြုံရေးစနစ်အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် "www.icloud.com" မှလွဲ၍ အခြားမဖြစ်နိုင်ပါApple Office suite (Pages, နံပါတ်များနှင့် Keynote) တစ်ခုလုံးကိုအီးမေးလ်နှင့်အလိုအလျောက်ဓာတ်ပုံညှိခြင်းအပြင်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များစွာတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ရှာဖွေပါ ကဲ့သို့အတိအကျတူညီ icon ကိုရှိကြောင်း tool တစ်ခု ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါဒါကြောင့်သင်အရှုံးမရှိဘူး
iCloud သို့ ၀ င်ရန်တစ်ဖန်ကျွန်ုပ်တို့အိုင်ဖုန်းနှင့်မှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်ထားသည့် Apple ID နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်နှင့်စကားဝှက်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အိုင်ကွန်ကိုကလစ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ရှာဖွေမှုပြုမည့်ကိရိယာ၏တရားဝင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်စနစ်သည်အကောင့်ကိုထပ်မံတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်သောအခါ Apple Maps မှတဆင့်နေရာချထားရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာသည်။ ကိရိယာတည်ရှိရာအတိအကျနေရာ။
အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထုတ်ထားသောကိရိယာများအားလုံး၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏ Apple ID နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည် မိသားစုထဲမှာ iCloud, ထိုအဖွဲ့ထဲရှိကျန် Apple ပစ္စည်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်။ တိကျတဲ့စက်ကိရိယာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးသောအခါ၎င်းသည်၎င်း၏တည်နေရာကိုချက်ချင်းဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စက်၏လက်ရှိဘက်ထရီသည်ကိုလည်းညွှန်ပြပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်စရာသုံးခုကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ထုတ်လွှတ်ရန် အသံကဖြေ - အိမ်မှာဆုံးရှုံးသွားရင် iPhone ကိုရှာဖို့
စတင် ဆုံးရှုံးမှုပုံစံ: iPhone မျက်နှာပြင်တွင်အလိုအလျောက်ပြသမည့်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုတောင်းလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မည်သူမဆိုအလိုရှိပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေပြီးပြန်ပို့နိုင်သည်။
delete iPhone ကို: အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြောက်လန့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွင်အထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များရှိပါက၎င်းစက်ကိုအဝေးမှရှင်းလင်းပစ်လိမ့်မည်။
iCloud ကသော့ခတ်ထားတဲ့ iPhone တစ်ခုကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲ
တစ်ပတ်ရစ် iPhone ပစ္စည်းဝယ်ယူသောအခါ၊ ဤမေးခွန်းသည်လျင်မြန်စွာပေါ်ပေါက်သည်။အခိုးခံရတဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းတာမျိုး၊ iCloud ကသော့ခတ်တာကိုဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ။ထို့ကြောင့်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူတော့မည့်ဤကိရိယာသည်ယခင်ဖျက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်ယခင်အိုင်ဒီအိုင်ဒီအကောင့်နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ရမည် အကြောင်းအရင်းနှစ်ခုကြောင့် iPhone ခိုးယူခံရခြင်း (သို့) ရောင်းသူဖြစ်သည့် iPhone ပိုင်ရှင်သည် iCloud သော့ခတ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိမပြုမိဘဲနှင့်၎င်းကိုယခင်ကစက်နှင့်ချိတ်။ မရခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်အက်ပဲလ်သည်ဘက်ထရီများကိုဤငွေပေးငွေယူအမျိုးအစားနှင့်ထားလိုက်သည် စက်တစ်ခုပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်မခံရခြင်းကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသိစေမည့်ဝက်ဘ်ကိရိယာတစ်ခု၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးသင့်တွင် activation lock ရှိပါက။ မကောင်းတာကဒီကိရိယာပျောက်သွားပြီ။ အခုသင်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဥပမာ iCloud ကို iCloud မှာ unlock လုပ်ဖို့လိုမလားဆိုတာသိခွင့်ပေးတယ်။
ဒုတိယ ၀ ယ်ယူထားသော iPhone ၏အခြေအနေကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိရန်အရေးကြီးသည်။ စျေးနှုန်းမြင့်မားသောကြောင့်အိုင်ဖုန်းသည်တစ်ပတ်ရစ်ဈေးကွက်သို့သူ့အားများစွာချေးငှားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်သာတန်ဖိုးနိမ့်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်စျေးကွက်သည် iPhone ထုတ်ကုန်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ , ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာများမှကျန်ရှာဖွေနိုင်သောစျေးနှုန်းများထက်သိသိသာသာနိမ့်ကျသောအခါဒုတိယအရောင်း ၀ ယ်သည့်မည်သည့် iPhone ကိုမဆိုအလိုအလျောက်ကြောက်ရွံ့ရမည်။ အခြားအက်ပလီကေးရှင်းအကောင့်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် iPhone ကိရိယာတစ်ခုကိုဝယ်ယူခြင်းသည်ငွေဖြုန်းတီးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တက်နေလျှင်၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များကိုပင်ဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ က။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပြင် iPhone ကိုအပြည့်အဝရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်အညိုရောင်ကိုစားနိုင်သည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ၏ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသော iPhone ကိုရရှိပါက၎င်းသည်တစ်ပတ်ရစ် iPhone ဝယ်ယူရန်မျက်စိတစ်ထောင်ဖြင့်လမ်းလျှောက်ရမည်။
iCloud က iPhone ကိုသော့ခတ်ထားရင်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလောကသို့အမြဲမလာနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေပေးငွေယူ၏အလယ်တွင်ရောက်နေပါက၎င်းကိရိယာသည် Apple ID နှင့်ချိတ်ဆက်သည်၊ မချိတ်ဆက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်လုံးဝအသုံးမဝင်ပါ။ ဒါကြောင့် iPhone မှာ Activation Lock လား၊ iCloud lock လားရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့နည်းလမ်း ၂ ခုကိုပြတယ်။ အရင်ကပြခဲ့တဲ့ Apple အတည်ပြုနည်းကိုသုံးလို့မရဘူး။
1 နည်းလမ်း: iPhone ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါ။ အကယ်၍ သော့မျက်နှာပြင်သည်မူလမြင်ကွင်းတွင်ပေါ်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့အားကုဒ်တစ်ခုတောင်းပါကအိုင်ဖုန်းကိုသက်ဆိုင်ရာ Apple ID မှ ဖျက်၍ မရပါ။
2 နည်းလမ်း: ပြန်လည်ရရှိသော iPhone ကိုတွေ့ရှိပြီး၎င်းသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌ရောက်ရှိနေပါက၎င်းသည်သူနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် Apple ID ၏စကားဝှက်တောင်းခံမည့်အချိန်ကာလမရောက်မှီ၎င်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည်။ ထို့အပြင် Apple ID နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မစပ်ဆိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်၊ ဤရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာခြင်းဖြင့်မည်သည့်လိမ်လည်မှုကိုမဆိုတားဆီးနိုင်ပြီးခိုးယူထားသောပစ္စည်းများနှင့်တရားမ ၀ င်သောခိုးယူသည့်ကိရိယာများနှင့်လည်းကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးနိုင်သည်။ ကာကွယ်ခြင်းကကုသတာထက်ပိုကောင်းတယ်၊ iCloud iPhone locks တွေရောက်ရင်ဘယ်တော့မှမနာပါဘူး။
iPhone အတွက် iCloud Lock ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
ဤလုံခြုံရေးအစီအမံသည်ထပ်မံဖြည့်စွက်သည်၊ ဒါတွေအားလုံးအတွက် Apple ကသင်ခန်းစာကောင်းတစ်ခုပေးထားတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် Apple Watch နှင့်သင်၏ iPhone တွဲဖက်ထားပါက၊ Apple Watch ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။
Make backup လုပ်ထား iOS ထုတ်ကုန်မှ
ချိန်ညှိချက်များ> ထိပါ iCloud။ အောက်သို့ဆင်းပြီးထွက်ကိုအသာပုတ်ပါ။ iOS7သို့မဟုတ်ထိုထက်စောသောအခါတွင်အကောင့်ကိုဖယ်ရှားကိုအသာပုတ်ပါ။
နောက်တဖန်ပြန်ထွက်ကိုအသာပုတ်ပါ၊ ပြီးနောက်ကိုအသာပုတ်ပါ iPhone မှဖယ်ထုတ်ပါ နှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ချိန်ညှိချက်များသို့ပြန်သွားပြီးအထွေထွေ> ကိုအသာပုတ်ပါ ပြန်လည်စတင် > အကြောင်းအရာနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုပယ်ဖျက်ပါ။ Find My iPhone ကိုသင်ဖွင့်ပါကသင်၏ Apple ID နှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကိရိယာကုဒ်နံပါတ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ချက်များကုဒ်တောင်းခံပါက၎င်းကိုထည့်ပါ။ ထို့နောက်ပယ်ဖျက် [ကိရိယာ] ကိုအသာပုတ်ပါ။
သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုပိုင်ရှင်အသစ်သို့လွှဲပြောင်းရန်သင့်အော်ပရေတာကိုဆက်သွယ်ပါ။ မသုံးဘူးဆိုရင် ကိရိယာနှင့်အတူ SIM ကဒ်၀ န်ဆောင်မှုအသစ်ကိုလွှဲပြောင်းရာတွင်အကူအညီတောင်းခံရန်လည်းသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
iCloud lock ကို jailbreak မှတဆင့်ဖယ်ရှားလို့ရလား။
သိသာထင်ရှားသည့်အဖြေမှာမရှိပါထိုသတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိလိုသော၊ မျှဝေခြင်းမပြုလိုပါ။ သင်မည်သည့်လိုအပ်ချက်အတွက်လိုအပ်မယ်ဆိုရင် iCloud ကိုဖွင့်လိုက်ပါ သင့်အားတရားဝင်ဖြစ်သောပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် Apple တွင်တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိပြီးသင့်အားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုစစ်ဆေးပြီးလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းရန်သင့်ကိုတာဝန်ယူလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာမြင်ရသည့်ဗီဒီယိုများနှင့်သင်ခန်းစာများသည်အလွယ်တကူလိမ်လည်မှုများဖြစ်ပြီးသင်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » iPhone အတွက် iCloud lock အကြောင်းသိထားသင့်သမျှ
စုံစမ်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာ iPhone activation lock ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာပြသရင် activate လုပ်ဖို့ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းကို icloud ဖြင့်သော့ခတ်ထားပြီးကျွန်ုပ်မည်သို့နေရမည်နည်း။
ငါ့မှာစက္ကန့်သုံး iPhone 4s ရှိတယ်၊ icloud ကိုပိတ်ထားတယ်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်သော့ဖွင့်လျှင် ipod အဖြစ်အသုံးပြုရန်ကျန်နေသေးသလား။
ROMEL CARDENAS ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ APP သည်ကျွန်ုပ်၏ IPHONE ကိုမလှုပ်ရှားပါကအိုင်ဖုန်းတစ်ခုမှတစ်ခုလုံးပိတ်ဆို့ခြင်းခံရနိုင်သလား။
ROMEL CARDENAS သို့စာပြန်ပါ
Ignacio Sala ဟုသူကပြောသည်
Yoendy Munoz Bravo ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ iPhone 6s ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာရှာတွေ့ပြီ
Yoendy Munoz Bravo အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သမီးများအတွက်အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းတွင်အိုင်ဖုန်း ၂ လုံး ၀ ယ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာပြသနာမရှိဘူး၊ နောက်တစ်ခုကဒါကို format လုပ်တဲ့အခါသူကကျွန်တော့်ကို operating system တပ်ဆင်ဖို့ခွင့်မပြုဘူး၊ သူတို့က EE ဖြစ်တဲ့မူရင်းကုမ္ပဏီဆီက sim card လိုတယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီမှာ Buenos Aires မှာငါလှူတယ်။ ကြောင်းကုမ္ပဏီထံမှမဆို sim ရ။ ငါ operating system ကိုဘယ်လို load နိုင်မလဲမည်သူမဆိုသိလား ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်စကားဝှက်သို့မဟုတ် iCloud key ကိုမတောင်းဆိုပါ၊ ထို့ကြောင့်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိကြောင်းစိတ်ချပါ ငါအိုင်ဖုန်းသမားတွေနဲ့စကားပြောပြီးသူတို့ဟာအနုတ်လက္ခဏာအုပ်စုထဲမှာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ ၎င်းကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ တစ်စုံတစ်ယောက်အားကျွန်ုပ်မည်သို့ပြသရမည်ကိုပြသပါ။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်သည်ဂီတကိုနားထောင်ရန်နှင့်၎င်းကိုတက်ဘလက်အဖြစ်သုံးရန်ကျွန်ုပ်ကို ပို၍ နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သမီးကပိုနှစ်သက်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Tatiana garcia ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ iPhone 5s ရှိတယ်၊ အဲဒါကို icloud ကပိတ်ထားတယ်။ ငါ့ကိုပေးလိုက်တဲ့စကားဝှက်ကိုလည်းငါမသိဘူး၊ အဲဒီလူကစကားဝှက်ကိုမသိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာသုံးစွဲဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။ ဆဲလ်အသစ်က
Tatiana garcia သို့စာပြန်ပါ
Mariela Araya Castillo ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ၎င်းကို iCloud မှပိတ်ဆို့ထားပါကခိုးယူခံရလျှင်ပြန်ပေးပါ။
Mariela Araya Castillo သို့ပြန်ပြောပါ
ငါ eBay မှာ Iphone6ကိုဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသုံးဖို့ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါသူတို့က T-mobile ကပိတ်ထားတယ်၊ ဒီကုမ္ပဏီမှာမရှိဘူး၊ jailbreak ကသော့ဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုတာကို Macservice ချီလီမှာသူတို့ပြောတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ iPhone7ပေါင်းပါပြီ။ ယခုကျွန်တော်မက္ကဆီကိုမှာ ၀ ယ်ပါပြီ။ ပီရူးမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ IDD ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ပါ။ သူကသော့ဖွင့်မရခဲ့ပေမဲ့ကျွန်ုပ်ဝယ်ခဲ့တဲ့ပိုင်ရှင်ပါ။ ၎င်းသည်ပန်းသီးဆိုင်ရှိအချို့သောအကူအညီများနှင့် Sapa မှအီးမေးလ်များကိုကျွန်ုပ်အားဒေသအလိုက်ဖွင့်လှစ်လိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်မက္ကဆီကိုတွင်အိုင်ဖုန်းအားလုံး၏ကဏန်းမဟုတ်ပါ၊
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ iPhone 5s ရှိတယ်၊ ငါသူတို့ဆဲလ်ဖုန်းရောင်းတဲ့နေရာကိုသွားပြီးအစကတည်းကဝယ်ပြီးပြီ။ ဆဲလ်ဖုန်းအားလုံးအဆင်ပြေတာတွေ့တော့အဲဒီအချိန်တုန်းကကင်မရာနဲ့ဆဲလ်အားလုံးကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တယ်။ ဖုန်းအားလုံးအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဆဲလ်ဖုန်းတစ်ဝက်လောက်ပဲသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ ယ်ပြီးတဲ့အခါအိမ်ကိုရောက်လာပြီး iPhone ကို icloud ကပိတ်ထားတယ်။ ပိုင်ရှင်ဆီကအီးမေးလ်ရှိတယ်၊ ငါဘယ်လိုဖျက်ပစ်လို့လဲ။ အဲဒါကိုဖျက်လို့မရဘူး၊ ipod လိုဖြစ်နေတယ်၊ ​​အကယ်လို့ icloud ပိတ်ဆို့မှုဖြေရှင်းချက်ရှိရမယ်၊ ဒီအပတ်အတွက်သော့ဖွင့်ဖို့ငါတော်တော်များများမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုရင်ငါသော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ မင်းရဲ့အကူအညီလိုအပ်တာကိုငါမလုပ်နိုင်ဘူး
Jesus Vazquez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ရဲ (ရဲမှတစ်ဆင့်) ထိုနေ့ကကျွန်ုပ်ထံမှခိုးယူခဲ့သော iPhone ကိုပြန်လည်ရယူထားသည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏နာမည်တွင်ငွေတောင်းခံလွှာရှိသော်လည်းဖုန်း၏ imei နှင့်၎င်းဖုန်းကို၎င်း၏ imei ကဖော်ပြသည်။ ငါ terminal ကိုသော့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအရည်အချင်းရှိသူသည်အသိအမှတ်ပြုပြီး terminal သည်ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်သည်ကိုအသိပေးသည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသူတို့ဖြေဆိုပေးကြတဲ့အက္ခရာမိုင်းဟာ ole, ole and ole ဆိုတဲ့ငါ့သတ္တိဆိုတာသက်သေပြနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။
APPLE နှင့် ICLOUD မှလူကြီးလူကောင်းများသည်သင်၏ terminal သည်ပြတ်တောက်သွားပြီးသင့်အားသတ်မှတ်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှတစ်ဆင့်ချဉ်းကပ်ရန်လိုအပ်ပါကသင့်တွင်ဖုန်းမရှိတော့ပါ၊ စက္ကူအလေးချိန်ရှိကြောင်း၊ သင်လိုချင်သည်ဆိုပါစို့။ သင်သေတ္တာကိုပြန်သွားရန်လိုအပ်သည့် iPhone တစ်ခုရှိရန်ပြန်သွားပါ။
ငါ iphone6ကို ၀ ယ်လိုက်ပြီးအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ sim card နှင့်အကောင့် idunes ထဲတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်အားစကားဝှက်တောင်းရန်တောင်းဆိုသော်လည်း၎င်းသည်ဖုန်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမသက်ရောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုသော့ဖွင့်ရန်ထားသော်လည်း“ ယခုမထည့်ပါ” ဟုဆိုသောနိမိတ်ငယ်တစ်ခုပေါ်လာသည်။ သူတို့ကကျွန်ုပ်ကိုခြေရာခံနိုင်မည်လား (သို့) ဖုန်း၏ဓါတ်ပုံများကိုသက်ဆိုင်ရာအကောင့်၏ icloud တွင်ပြသရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား။
ငါမက္ကစီကိုမှာ iPhone 8 ခိုးယူခဲ့သည်။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား iCloud အကောင့်တစ်ခုမှချိတ်ဆက်မှုအားမဖြုတ်နိုင်ပါကဆုံးရှုံးမှုကိုသာသက်ဝင်စေပြီးဖုန်းကို SIM ထည့်ပြီးသို့မဟုတ်ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်လိုက်သည်နှင့်၎င်း၏တည်နေရာကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာသူတို့ကကျွန်တော့် SIM ကိုထုတ်ပြီးအဲဒီမှာသိမ်းထားတဲ့အဆက်အသွယ်တွေရဖို့အခြားဖုန်းတစ်လုံးထဲထည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီနည်းက Apple က ID နဲ့ Password တောင်းတဲ့စာမျက်နှာအတုတွေနဲ့ငါ့ကိုလှည့်စားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ၇ ရက်ကျော်လွန်သွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုအခြားဆင်းမ်ကဒ်တစ်ခုတွင်ပြန်လည်ရယူပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ID နှင့် password ရယူရန်ကြိုးစားနေသည့်စာမျက်နှာအတုများမှစာများလက်ခံရရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် Apple မှလုံခြုံမှုမရှိသောရပ်ကွက်ရှိကိုယ်ပိုင်လိပ်စာရှိသည့်ဖုန်း၏တည်နေရာကိုပေးပို့သောအီးမေးလ်များစွာကိုလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ခိုးယူထားသောဖုန်းကိုဘယ်တော့မျှအသုံးမပြုနိုင်ကြောင်းသိရ။ ဝမ်းသာပါသည်။ လူကြီးလူကောင်းများ၊ တစ်နေ့မှာဖြစ်ပျက်လျှင်၊ သင်၏ icloud အကောင့်ကိုမည်သည့်နေရာ၌ထားရှိသည်ကိုသတိပြုပါ။ သူတို့သော့ဖွင့်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အချက်အလက်များကိုမှားယွင်းသောစာမျက်နှာတွင်ထားရန်သူတို့ကိုလှည့်စားရန်စီမံခြင်းဖြစ်သည်။
Grand Theft Phone ဟုသူကပြောသည်
ငါဆဲလ်ဖုန်းခိုးယူလိုက်တယ်၊ အဲဒါကိုငါဘယ်လိုဈေးကြီးကြီးရောင်းနိုင်လဲ။ : v
Grand theft phone သို့ပြန်သွားပါ
ဟိုဆေး Armando Chirinos Anaya ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ ခင်ဗျားဘယ်လိုနေလဲငါပိုင်ရှင်ဆီက iPhone6ကိုဝယ်လိုက်တယ်။ အိုင်ဖုန်းမှာပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးပိုင်တဲ့ icloud အကောင့်ရှိတယ်။ အီးမေးလ်နဲ့စကားဝှက်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ငါဝင်တဲ့အခါငါအကောင့်ဖြစ်သွားပြီ။ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်လက်လှမ်းမမှီသောလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အီးမေးလ်ပို့သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတောင်းသည်၊ သို့မဟုတ်သူနံပါတ်ကောင်းစွာမိသားစုပြproblemsနာများရှိသည်။ ပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်ုပ်မေးမြန်းသောပန်းသီးအကောင့်ကိုမမေးနိုင်ပါ။ သင်၏လုံခြုံရေးမေးခွန်းများ၊ သင်၏အီးမေးလ်ကိုမသိဘဲသင်၏ iCloud ထဲသို့ဝင်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ထံ သွား၍ သင်၏ iCloud ကို "withdraw" လုပ်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ဒီဟာကုန်ကျမလား။ ပီရူးမှာ
jose armando chirinos anaya မှစာပြန်ရန်
မင်းကအိန္ဒိယ asshole ပါ
လေးစားပါတယ် လူကြီးလူကောင်း၊ လုံခြုံရေးအတွက်စိတ် ၀ င်စားသူတွေကဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသော့ဖွင့်ပြီးယူနိုင်မလားဆိုတာသိချင်ကြတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Android သုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွင် Galaxy Note5အမြစ်တွယ်နေပြီးစက်ရုံမှဖုန်းကိုပြန်ယူသောအခါဒေတာသိမ်းဆည်းထားလိုက်သည်။ ယခုတွင် J8 ကိုပြန်လည်ပြုပြင်သောအခါပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ google account ကိုတောင်းသည်။ ငါ 6S ဝယ်ဖို့စီစဉ်နေကတည်းက iCloud သော့ခတ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိမရှိသိလိုပါတယ်။ ဖုန်းသည်ဆော့ဖ်ဝဲအားမွမ်းမံနေသမျှကာလပတ်လုံးလုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ကိရိယာတစ်ခုချင်းစီ၏အပိုဆောင်းလုံခြုံရေးဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်မှီခိုနေသရွေ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊
၁၀၀% လုံခြုံရေးမရှိသော်လည်း iCloud သော့ခတ်ခြင်းကတစ်စုံတစ် ဦး အားသင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲသင်၏အချက်အလက်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူခြင်းမှတစ်စုံတစ် ဦး အားတားဆီးပေးသည်။ သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
သာယာသော RR ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမျှဝေကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်မှာ ipad2ကိုဝယ်လိုက်ပြီ၊ မင်းမှာ icloud အကောင့်ရှိတယ်၊ Ipad ခိုးယူခံရမယ်၊ ဒါပေမယ့် icloud အကောင့်ကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပြီ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအိုင်ပက်ကနေငါမဖျက်နိုင်ဘူး၊ ဖယ်ထုတ်လို့ရလား၊ အကောင့်ကိုပြီးပြည့်စုံစွာပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းပြန်လည်ပြုပြင်စရာမလိုဘဲ jailbreak ကဲ့သို့သော hack အားဖြင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
sebasty RR အားပြန်ပြောပါ
လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း
သူတို့ကငါ့ကို icloud ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ iPhone တစ်ခုကိုရောင်းလိုက်တယ်။ ငါဆဲလ်ဖုန်းနဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။
OS X 10.11.6 နှင့် tvOS 9.2.2 ၏ပထမဆုံး beta များလည်းရောက်လာပြီ
Apple သည် iOS 9.3.3 ၏ပထမဆုံး beta ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်